Waxaan ku tageeray mudane muuse biixi :
Tuesday November 07, 2017 - 12:58:01 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Cidina ma dafiri karto,inuu yahay muwaadin halgamaa ahaa oo maalmihii adkaa wadankan naftiisa usoo huray,halka raga maanta la tartamayo la ogaa kaalintoodi
Cidina ma dafiri karto,inuu yahay muwaadin halgamaa ahaa oo maalmihii adkaa wadankan naftiisa usoo huray,halka raga maanta la tartamayo la ogaa kaalintoodii iyo mawqifkii ay ka taagnaayeen heeryadii dulmiga iyo gumaysiga ahayd ee shacbigan duulaanka ku ahayd,taariikhdu waa lama ilaabaan.
Waa xiligii ay dhalin yaradu dhamaantood si sax ah oo aan shaki ku jirin u dareemi lahaayeen,in horumarinta mustaqbalkeenu xidhiidh adag la leeyahay kolba sidaynu ugu abaal gudno una qiimayno geesiyaashii, taariikhda fiican inooga tagay.
Muuse bixi cabdi iyo mujahidiin faro badan sida madaxwaynaheena Somaliland ahmed maxamed maxamuud ( siiranyo ).
Midna ismuu lahayn waad noolan ugumanay tallo galin in ay noolladaan ismanay lahayn dalkan ayaydun madax ka noqon, balse nasiibka ayaa siiyay, maanta in ay dalka madax ka noqdaana waa wax alle looga xamdi naqo,nafahooda ayay usoo hureen si jiilka iyaga ka danbeeyaa dhibtan aanu u marin
Muuse biixi waxa uu hormood ka ahaa khubaradii aasaastay golaha guurtida Somaliland,taariikhdaana u qiraysa.
Muuse bixi cabdi waxa uu ka soo qayb qaatay:Nabadayntii,dib udhiskii ,heshiisiintii reer Somaliland,waa mudane goob joog usoo ahaa dhamaan shirarkii iyo dadaaladii dhidibada loogu adkaynayay qaranimada somaliland,mid kaliya oo uu ka maqnaa ma jiro ilaa hada horumarka dalka ayuu ka shaqaynayay.
Waa sababaha aan ku tageeray muuse bixi cabdi,inaan codkayga ugu abaal gudaana waa dareen igu soo maaxanaya,oo aan qayrkayna ugu baaqayo.Sababtoo ah wanaaga qofkastaa dadkiisa iyo dalkiisaba u qabto,abaalkiisu waa wanaag iyo in maalintiisa laga farxiyo.
Hanaanka nidaamka dimuquradiyada ah,ayaabaa marka doorashada isa soo ag joojinaysa oo simaysa, isna soo gaadhsiinaysa,nin isagu 40 sano ka soo shaqaynayay dhisitaanka iyo xaqiijinta jiritaanka Somaliland oo xor ah,iyo nin hawlo kale iskaga mashquulsanaa kuna maqnaa!waase hal xidhaale ay tahay inay muwaadiniinta codaynayaa iyagu kii mudan u hiiliyaan.
Waxa kale oo uu muuse dheer yahay musharixiinta hada la tartamaysa isagu somaliland ayuu nagula nool yahay,waana mid dhib iyo dheefba inala wadaagaya,maanta hadii wax inagu dhacan alle inaguma keenee wuu inala qaybsanayaa.
Iyo waliba caruurtiisa iyo kuweenu waa isku iskuul,isku dhakhtar,isku jaamacad,halka raga la tartamayaa iyagu yihiin kuwo qurbaha dagan oo somaliland u jooga una yimaada sida dalxiisayaasha caalamiga ah.
Mida kale ee ugu wayni waa in cadawga Somaliland markuu maqlo muuse bixi cabdi,uu dib inooga fadhiisanayo oo aanay cidi sidaa Somaliland uu soo eegi doonin,halka musharixiinta qaarkood iyaga loogaba dabaal dago meelo aynu ognahay.
Muuse bixi cabdi maanta nin la garaydh ahi lama tartamayo,wuxuu dheeryahay:Hal adayg,karti badan,daacad-nimo,go’aan qaadasho iyo waliba firfirxooni istaahisha in wadankeenan soo koraya looga faa’iideeyo.
Sucaad sh ahmed